AbaXhobisi beTyala lePhepha lePhepha kunye neFektri - Abavelisi bamatyala basePoly Poly china
I-polyester yefowuni yomqamelo
Ubuhle bendalo njengawe bufanele ukulala * ubuhle * bendalo. Le pillowcase ye-satin e-eco-friendly kunye nokuzinzileyo ifunyenwe kwizinto ezisekelwe kwizityalo. Lala kakuhle usazi ukuba umqamelo wakho ulungele wena kunye nokusingqongileyo. 1. Izinto oly satin. 2. Ubungakanani Ubungakanani obuqhelekileyo: 20 `` x26 '' Ubungakanani boKumkanikazi: 20 '' x30 '' Ubungakanani boKumkani: 20 '' x36 '' 3. Ukhetho lombala ukuba ukhetha ukhetho lombala. Mhlophe, isilivere, mnyama, pinki…. Intshayelelo emfutshane ye-Custom Satin Pillowcase Fabric Choices 100% Polyester satin ...
Umbala weblue satin umqamelo wombala oluhlaza okwesibhakabhaka
Ityala le-poly satin yomqamelo
Poly satin umqamelo icala iseti imaski iseti
Imvulophu ipholiyesta yomqamelo